Daawo xisbiga Wadani oo si ba.an ugu eedeyay xukuumada habkii ay u xustey munaasibadii 26ka June | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Daawo xisbiga Wadani oo si ba.an ugu eedeyay xukuumada habkii ay u xustey munaasibadii 26ka June
Published on June 28, 2017 by sdwo · No Comments
Xisbiga wadani ayaa arinka ku sababeeyay dhawr arimood. Ta ugu horeysana waxay sheegeen in halkii laga xusi lahaa habeenka 26ku soo gelayo la xusay habeenkuu 27ku soo gelaye. Takale waxay sheegeen in sidii cadada ahayd ee calanka 12ka habeenimo loo saari jirey aan la saarin oo xaflada 10kiiba lagu kala tegay. Waxayna xukuumada ku eedeyeen inaanay ahayn xaflad hore loo soo abaabulay ee markii ay arkeen dowlada xamar oo habeenkii saxda ahayd ee 26ku soo gelayay xustey uun inay degdeg habeenkii danbe ay si aan qorsheysanayn u xuseen. Xagan hoose ka daawo warbixintaasi